စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းသစ်က ဂျူဗင်တပ်စ်ဖြစ်လာမလား
ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စီရော်နယ်လ်ဒို C Ronaldo သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့ သတင်းထွက်ပေါ်
5 Jul 2018 . 4:07 PM
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ပေါ်တူဂီနာမည်ကျော်တိုက်စစ်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို C Ronaldo ဟာ စီးရီးအေထိပ်သီးကလပ် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို တစ်ပတ်လစာပေါင်(၅)သိန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်ဆိုပြီး ဗြိတိန်မီဒီယာတွေက ဖော်ပြနေပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူ့ကို စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ အင်တင်တင်ဖြစ်နေတဲ့ ရီးယဲလ်ဥက္ကဋ္ဌဖလော်ရင်တီနိုပီရက်ဇ် Florentino Perez နဲ့ ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေဖြစ်နေပြီး သူ့ရဲ့အေးဂျင့် ဂျော့ခ်ျမန်ဒက်ဇ် Jorge Mendes က စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ The Sun သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အသက်(၄၁)နှစ်အရွယ်လောက်အထိ ဘောလုံးဆက်ကစားသွားဖို့ ဆန္ဒရှိနေပြီး ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ဘောလုံးသမားဘ၀ ကုန်ဆုံးသွားလိုပေမယ့် အခုအခြေအနေအရ ရီးယဲလ်နဲ့လမ်းခွဲဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးခဲ့သူ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက ပေါင်(၈၈)သန်းအထိပေးပြီး ကမ်းလှမ်းဖို့ စီစဉ်နေသလို ရီးယဲလ်အသင်းကလည်း ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဘက်က အမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းခဲ့ရင် လက်ခံစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်လို့ The Sun သတင်းစာကဆိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကိုသာ စီရော်နယ်လ်ဒို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူလိုချင်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းလစာငွေကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့ ကြေးအမြင့်ဆုံးကစားသမားအဖြစ်လည်း ရပ်တည်နိုင်မှာပါ။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှူး ဟီဂွါအင် Higuain ကို ပေါင်(၇၉)သန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီး ကလပ်စံချိန်တင်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတို့ရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ဇာတ်လမ်းက အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမလား၊ ဒါမှမဟုတ် သတင်းအဖြစ်သက်သက်နဲ့ ပြီးဆုံးသွားမလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်သွားရမှာပါ . . .
ကစားသမားဘ၀တစ်လျှောက် စီရော်နယ်လ်ဒို ရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားများ
ဂြူဗငျတပျဈကို ပွောငျးရှဖေို့ စီရျောနယျလျဒို C Ronaldo သဘောတူညီမှုရခဲ့ပွီလို့ သတငျးထှကျပျေါ
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ပျေါတူဂီနာမညျကြျောတိုကျစဈကစားသမား စီရျောနယျလျဒို C Ronaldo ဟာ စီးရီးအထေိပျသီးကလပျ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို တဈပတျလစာပေါငျ(၅)သိနျးနဲ့ ပွောငျးရှဖေို့ သဘောတူညီမှုရခဲ့တယျဆိုပွီး ဗွိတိနျမီဒီယာတှကေ ဖျောပွနပေါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ သူ့ကို စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ အငျတငျတငျဖွဈနတေဲ့ ရီးယဲလျဥက်ကဋ်ဌဖလျောရငျတီနိုပီရကျဇျ Florentino Perez နဲ့ ဆကျဆံရေးအဆငျမပွဖွေဈနပွေီး သူ့ရဲ့အေးဂငျြ့ ဂြော့ချြမနျဒကျဇျ Jorge Mendes က စီရျောနယျလျဒိုရဲ့အပွောငျးအရှအေ့တှကျ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးတာဝနျရှိသူတှနေဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့တယျလို့ The Sun သတငျးစာကဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
အသကျ(၃၃)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ အသကျ(၄၁)နှဈအရှယျလောကျအထိ ဘောလုံးဆကျကစားသှားဖို့ ဆန်ဒရှိနပွေီး ရီးယဲလျအသငျးမှာ ဘောလုံးသမားဘ၀ ကုနျဆုံးသှားလိုပမေယျ့ အခုအခွအေနအေရ ရီးယဲလျနဲ့လမျးခှဲဖို့ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈအတှငျး ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈအထိ စာခြုပျသကျတမျးတိုးခဲ့သူ စီရျောနယျလျဒိုကို ဂြူဗငျတပျဈအသငျးက ပေါငျ(၈၈)သနျးအထိပေးပွီး ကမျးလှမျးဖို့ စီစဉျနသေလို ရီးယဲလျအသငျးကလညျး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဘကျက အမှနျတကယျကမျးလှမျးခဲ့ရငျ လကျခံစဉျးစားဖို့ရှိတယျလို့ The Sun သတငျးစာကဆိုပါတယျ။ တကယျလို့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကိုသာ စီရျောနယျလျဒို ပွောငျးရှခေဲ့မယျဆိုရငျ သူလိုခငျြနတေဲ့ ကမ်ဘာ့ထိပျတနျးလစာငှကေို ရရှိမှာဖွဈပွီး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ပွောငျးရှေ့ ကွေးအမွငျ့ဆုံးကစားသမားအဖွဈလညျး ရပျတညျနိုငျမှာပါ။ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈတုနျးက အာဂငျြတီးနားတိုကျစဈမှူး ဟီဂှါအငျ Higuain ကို ပေါငျ(၇၉)သနျးနဲ့ချေါယူခဲ့ပွီး ကလပျစံခြိနျတငျလညျးဖွဈခဲ့တယျ။ စီရျောနယျလျဒိုနဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးတို့ရဲ့ အပွောငျးအရှဇေ့ာတျလမျးက အမှနျတကယျဖွဈလာမလား၊ ဒါမှမဟုတျ သတငျးအဖွဈသကျသကျနဲ့ ပွီးဆုံးသှားမလားဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့သှားရမှာပါ . . .
ကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ စီရျောနယျလျဒို ရယူခဲ့တဲ့ ဆုဖလားမြား